Sida Loo Sameeyo Xarfaha Gothic: Cashar Sharaxeed Kooban | Hal-abuurka Online
Source: Envato element
Nakhshadeynta xarfaha maanta waa weji kale oo ka mid ah wejiyada lagu soo daray adduunka naqshadeynta garaafyada. Taasi waa sababta aan u helno farta nooc kasta ah, oo leh serif dheer, sans serif, joomatari wareeg ah iwm.
Maanta waxa aanu halkan idiinku soo gudbinaynaa qaab qoraaleed oo aan maanta dhalan, balse sanado badan soo jiray, maantana waxa ay ku guulaysatay in ay casriyayso oo ay halyeyga u noqoto calaamado badan oo lagu daabaco albamka muusiga ah, boodhadhka iyo waliba menu-yada makhaayadaha. Runtii, waxaan ka hadlaynaa xarfaha gothic.
Maqaalkan, waxaan ku sharxeynaa sida loo naqshadeeyo si aad u abuurto mashaariic waaweyn.
1 typography Gothic
2 Sida loo Nakhshadeeyo Farta Gothic: Casharrada
2.3 Foomamka kale
3 Nashqadayaasha Nooca
3.2 Noo cad
3.3 Veronika buriyaan
Noocyada nooca Gothic, oo sidoo kale loo yaqaano jaban ama jajab, waxa ay ku salaysan yihiin xarfaha dhexe (Medieval calligraphy), yacni, waxa ay ka yimaadeen wakhtiyadii dhexe oo ay ka soo jeedaan alifbeetada Laatiinka. Waxay bilaabeen in loo isticmaalo marxaladda waqtiga iyo Gutenberg's 42-line Kitaabka Quduuska ah ayaa soo muuqda, oo u socda dhinaca qoraalka casriga ah: Fraktur, oo loo isticmaalay in lagu qoro qoraallada Jarmalka laga soo bilaabo qarnigii 1941aad ilaa uu Hitler mamnuucay isticmaalkiisa XNUMX. Maanta nashqado badan oo noocyo ah ayaa abuuraya wajiyo cusub oo laga soo qaatay qoraaladii hore ee Gothic.
Astaamaha rasmiga ah ee qoyska noocaan ah waa:
Xarig qaro weyn oo toosan iyo mid toosan
Wadooyin dhuuban oo xikmad leh
Koritaanka gaaban iyo hoos u dhaca
Dhammaystiro aad u faahfaahsan
Waxaas oo dhami waxay ka dhigayaan xarfaha Gothic xarfaha guud ahaan xarfaha ugu badan ee ductus, taas oo ah, iyadoo ay adag tahay in si weyn loo qoro.
Marka laga hadlayo isticmaalka, waxaan xaqiijin karnaa in loo adeegsaday naqshado leh taabasho taariikheed oo muhiim ah, habkan, waxaan ka heli karnaa iyaga waddooyin duug ah, baakad farmaajo ama buskud iyo cabitaanno badan oo caado taariikhi ah leh sida biirka.
Grotesque: Sababtoo ah qaabkeeda xiisaha leh iyo xiisaha leh, waxay ahayd bilowgii qarnigii XNUMXaad markii Gothic bilaabay in loo yaqaanno grotesque. In kasta oo markii hore ay ahayd in ay taariikhda dib uga noqdaan, iyadoo ay ugu wacan tahay cududdii xoogga badnayd ee doon iyo makaaniko ay haysteen waqtigoodii. Jilaageedu waa cidhiidhi oo xariiqiisu waa isku mid. Isaga "g" wuxuu leeyahay laba sare iyo "G" gadhkiisa, oo ka duwan kuwa aad u qurux badan. Waxa kale oo xusid mudan dhererka x ee xarfaha yaryar, kaas oo ka shaqeynaya doorashada qaabkan xarfaha marka daabacaaddu ay tahay in ay ku jiraan qaybo yaryar.
Neo-Grotesque: Sida aan sheegnay, XNUMX-meeyadii, geeddi-socodkii waa la beddelay oo Gothic-kii la diiday ayaa soo noolaaday. Fududnaanta iyo toosnaanta grotesques waxay ka dhigtay kuwa ugu habboon xilliga cusub ee tignoolajiyada soo socda. Laakiin grotesques wax yar ayaa laga fakaray, ma aysan joojin in lagu farsameeyo xaraashka la'aanteed, taasina waa sababta qoraal-qaadeyaashu ay bilaabeen inay abuuraan dhismayaal nidaamsan, oo leh xitaa khadadka isku midka ah: neo-grotesque. Waxaan dhihi karnaa in quruxda ugu badan ee neo-grotesques, Waxaynu ka helaynaa farta Swiss-ka laga soo bilaabo dagaalkii labaad ee aduunka ka dib. Waan ognahay Helvetica Neue.
Joometri: Noocaan Gothic wuxuu u muuqdaa mid lagu sawiray taliye iyo kombuyuutar. Xarfo toosan oo wareegsan, fikir badan, ku dhawaad ​​xisaab. Waxaa la soo dhawaaday XNUMX-meeyadii, waagii shaqeynta iyo dugsiga Bauhaus. Waxaan ku kala saareynaa wareega "o", maqnaanshaha garka ee "G" iyo guud ahaan sababtoo ah waxay u muuqdaan kuwo lagu sameeyay labajibbaaran, bevel iyo compass. Marar badan waxaan helnaa samaynta "a", oo markeeda, mid wareeg ah, oo aad ugu eg "d" ama "o".
Bani'aadamnimada Bini'aadmiyeyaashii ugu horreeyay ee Gothic waxay ka soo jeedaan qorista calligraphic iyo saamiga caasimadda qadiimiga ah sida romanka iyo kiis hoose sida farta aadamiga. Caadi ahaan waxa nala tusiyaa miisaan aan asymmetrical ah oo faraantiyadooda ku jira iyo cidhifyada xariiqda xagasha. Sida kuwa grotesque, waxay leeyihiin "g" oo ah laba joog, laakiin kuwan ka duwan waxay ka maqan yihiin garka "G". Dabaqa hoose ee "e" wuxuu tilmaamayaa midig. Marka la soo koobo, waxay noqon lahaayeen Roomaan aan lahayn final.
Sida loo Nakhshadeeyo Farta Gothic: Casharrada
Warbixin kooban oo ku saabsan xarfaha Gothic ka bacdi, waxaan si tallaabo tallaabo u sharixi doonaa sida loo naqshadeeyo. Kaliya waa inaad raacdaa tillaabooyinka aan ku tusinno hoos waxaadna noqon doontaa khabiir ku takhasusay xarfaha.
Si aad u samayso casharkan, waxaad u baahan tahay inaad gacanta ku haysato kamarad iyo barnaamij tafatir. Waxaan sidoo kale kugula talineynaa inaad raadiso shay kasta oo laga yaabo inuu ku jiro qaabkan qoraal-qoraalka: wargeysyada, majaladaha, rinjiyeynta, iwm.
Ku qaado sawirro dhijitaal ah oo dukumeenti ah oo wata kamarad dhijitaal ah ama iskaanka in aad heshay in ay leeyihiin xarfo gothic. Xaaladdan oo kale, waa inaad wax ka beddeshaa, si aad uga dhigto mid weyn, xarfaha leh barnaamijka tafatirka.
Daabac sawirka, waxaad ku samayn kartaa daabacahaaga ama dukaanka nuqulka ah si aad u daabacdo, haddii aad rabto vinyl waxaad si toos ah ugu daabacan kartaa warqadan ka dibna ku dheji meel kasta oo aad rabto. Waxa kale oo aad u bedeli kartaa naqshadaada tattoo gothic, sawirka hoose waxaad haysataa tusaale.
Daabac sawirka, waxaad ku samayn kartaa daabacahaaga ama dukaanka koobiga si aad u daabacdo, haa waxaad rabtaa vinyl ma daabaci kartaa si toos ah ugu dheji warqadan ka dibna ku dheji meel kasta oo aad rabto. Adiguna waad awoodaa u beddel naqshaddaada tattoo gothic, sawirka bidix waxaad haysataa tusaale.
Haddii waxa aad rabto ay tahay inaad la yaabto asxaabtaada adoo ku qoraya magacooda xarfaha Gothic, waxa ay tahay inaad sameyso si aad u barato sawir-gacmeedka waa inaad raad raacdo xarfaha oo ku celiso dhowr jeer, markaa waa la samayn doonaa. diyaar u ah inaad qorto magacaaga ama waxaad rabto xarfaha gothic.
Waxa kale oo aad soo dejisan kartaa alifbeetada gothic. Soo deji sawirka oo daabac, waxaad samayn kartaa isku-duubni leh xarfaha gothic. Sawirada qaarkood waxaad sidoo kale isticmaali kartaa nambarada gothic, dhalashadaada ama xaflada Halloween.
Qiimee shaqadaada adiga oo ku cuskanaya gidaarka oo ka eeg ugu yaraan 10 fiit (3m). Sidoo kale, ku hay muraayad shaqadaada horteeda oo ka fiiri muraayadda. Tani waxay ka dhigi doontaa in erayada adag tahay in la akhriyo, ku qasbi maskaxda in ay diiradda saaraan sifooyin faneedka erayada, sida halabuurka, dheelitirka, iyo wada noolaanshaha. Qor aragtida shaqadaada inta lagu jiro qiimeynta. Tusaale ahaan, waxaad qori kartaa: "Dhammaystuhu kuma filna."
Dib u eeg sawirka ku salaysan qoraalada aad samaysay tallaabadii hore. Ku soo celi habkan is dhaleecayn iyo dib u eegis ilaa aad ku qanacsan tahay sawirkaaga ereyga.
Waa kuwan liiska qaar ka mid ah naqshadeeyayaasha nooca ugu fiican si ay kuu dhiirigeliyaan. Qaarkood waad garan doontaa qaarna waad ogaan doontaa.
Waxaa si joogto ah loogu sifeeyay inay tahay qoraa, naqshadeeye, farshaxan, iyo qoraa. Isagoo ka shaqaynayay saldhiga uu ku leeyahay jasiirad yar oo ku taal Xeebta Galbeed ee Kanada, garaafkiisa, shakhsiyadiisa, maskaxdiisa iyo mararka qaarkood shaqadiisa yaabka leh ayaa kasbaday aqoonsi caalami ah. Iyada oo raacaysa xiisaheeda kakanaanta iyo qaab-dhismeedka, Marian waxa ay caan ku tahay farteeda gaarka ah, farshaxan tifaftiran oo faahfaahsan oo sax ah, shaqo gacan-ku-taag ah, iyo xirfaddiisa leh stencil iyo qurxiyo.
Iyadu waa naqshadeeye madax-bannaan iyo naqshadeeye nooca saldhigeedu yahay Barcelona, ​​magaalada ay ku kortay iyo meeshii ay ku baratay naqshadeynta garaafyada ee Bau, Center Universitari de Disseny. Ka dib waxa uu shahaadada Masterka ku qaatay Eina Advanced Typography, halkaas oo uu ka bilaabay in uu tijaabiyo nooca naqshadaynta.
Tan iyo 2008 waxay u shaqeysay sidii naqshadeeye garaafyo istuudiyo kala duwan oo ku yaal Barcelona ilaa 2010 waxay go'aansatay inay u guurto Netherlands. Halkaas ayuu sanadkii 2011-kii ku bartay Master Type and Media ee KABK ee Hague.
Wuxuu hadda u shaqeeyaa sidii madax-bannaaniye macaamiisha ah oo ka kala yimid meelo kala duwan oo adduunka ah wuxuuna ku baraa fasallada qoraalka ee Bau. Waxaa ka mid ah mashaariicdiisii ​​ugu dambeeyay, waxaa habboon in la muujiyo iskaashiga uu Jordi Embodas u sameeyay Underware.
Iyadu waa naqshadeeye noolaa iyo Waxaa lagu tababaray magaalooyin kala duwan sida Munich, Vienna iyo Milan. Magaca noocaan iyo xamaasada naqshadeynta dabeecadda ayaa dhawaan ka mid noqday kooxda la xushay ee 53 qoraal-qaadeyaal oo ay doorteen Ururka Typographique Internationale (ATypI) tartanka naqshadaynta nooca labaad ee xarafka 2 ee caalamiga ah.
Nooca Maiola, oo Burian uu bilaabay naqshadeynta 2003 laguna daabacay TypeTogether 2005, ayaa mas'uul ka ah soo gelitaankiisa naadigan halkaas oo kaliya heerka ugu sarreeya ee naqshadeynta nooca ku habboon.
Iyadu waa naqshadeeye garaaf ahaan iyo qoraal-yaqaan, waxay ka shaqeysaa Barcelona, ​​​​oo ay ku dhalatay 1968. Waxay leedahay aasaaskeeda, Type-Ø-Tones. Waxa kale oo ay caan ku tahay in ay macallimad Qoraal-qorista ka ah Eina, Elisava oo ay barato aqoon-is-weydaarsiyo Spain oo dhan ah. Waxay haysataa laba abaalmarin oo Laus ah iyo laba shahaado oo heer sare ah oo qoraal ah iyo abaalmarinta warqadda.2 ee AtypI.
Iyadu waa qoraaga TypoMag, typography ee majaladaha iyo la-qoraa buugga "Sida loo abuuro fonts". Laga bilaabo sketch ilaa shaashadda, oo leh Cristobal Henestrosa iyo José Scaglione.
Waxaan rajeyneynaa inaad sii waddo naqshadeynta xarfo kale oo badan iyo inaad dhiirigelisay oo aad baratay. Intaa waxaa dheer, waxaad sidoo kale booqan kartaa qaar ka mid ah maqaallada aan kuugu soo qornay oo aad ka sii wadi karto inaad wax badan ka barato farta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Sida loo sameeyo xarfaha gothic
Sida loo abuuro sawirada saamaynta labanlaaban ee Photoshop